Ku saabsan Ellicott Dredges, Shirkad Soo Saara Qalabka Dredge
Caalamku Waa Ixtiraamaa.
Ellicott Dredges waa alaab-qeybiye ku saleysan Baltimore, Maryland (USA) oo ku tiirsan biyo-soo-saareyaal wax lagu dhuuqo oo tayo leh. Magaca caanka ah ee Ellicott® waxaa looga yaqaanay adduunka oo dhan adkaysi, karti, iyo jahooyin badan, oo dib ugu noqonaya dhismihii asalka ahaa ee kanaalka Panama. Waxaan u qaabeyneynaa mid kasta oo ka mid ah qashinkeena halkan xarunteenna. Warshadeenna wax soo saar waxay ku yaalliin Baltimore, Maryland, iyo New Richmond, Wisconsin.
Laga soo bilaabo 2009, Ellicott Dredges wuxuu xubin ka ahaa qoyska Markel Ventures ee shirkadaha. Shirkad hoosaad ka ah Shirkadda Markel (NYSE - MKL), Markel Ventures waxay shaqaaleysiisaa in ka badan 7,000 oo qof guud ahaan wax soo saarka, macaamiisha, adeegyada ganacsiga, adeegyada maaliyadeed, iyo qeybaha daryeelka caafimaadka. Qayb hoosaad kastaa wuxuu u shaqeeyaa si madax banaan weli wuxuu hayaa taageerada Markel Ventures.
Nambarada Nooca Ellicott®
Maaddaama uu yahay Hoggaamiye Caalami ah Nidaamyada Daadinta iyo Xallinta, Astaanta Ellicott® waxay ku uruurisay tirooyin aad u wanaagsan warshadaha.
Darajooyin Soo Diray